प्रत्येक राजधानी जो तुरुन्तै प्रश्न शहर कस्तो निर्धारण एक अद्वितीय चिन्न स्थलहरू, छ। रूस को मुख्य शहर Pashkov हाउस छ। मास्को मा, दुनिया साहित्य सूर्य Voland सूर्यास्त Azazello सधैंभरि उनको विदाई जांच जो मा सुन्दर मास्को र भन्नुभयो एक Belvedere संग Mihailom Afanasievichem Bulgakovym भवन मा immortalized तथाकथित।
को वास्तु कृति को नाम दिए मानिस थिए
"कुनै आश्चर्य Bulgakov Mihail आफ्नो वर्ण, छैन घरमा र (यो मास्को ... सबै भन्दा थियो त्यसपछि) छत मा राखिएको राम्रो, कुनै।" एक भन्दा सुन्दर भवनहरु मास्को मा "मास्टर र Margarita" Pashkov हाउस को सिपालु लेखक, "पहिलो रूसी वोदका राजा", Pashkova पेट्रा Egorovicha, घमन्डी र contentious (छिमेकीहरूलाई quarreled) व्यक्ति को क्रम द्वारा निर्मित भनिन्छ। हरेक कप्तान-लप्टन (अब वरिष्ठ लप्टन), पनि कुलीन जीवन गार्डस Semenov रेजिमेन्ट मा सेवा पूरा, सही मास्को Kremlin अगाडि आफ्नो आनन्द निर्माण "आफ्नो व्यक्तिगत Kremlin" छैन। एक धनी किसानले आफ्नो स्मृति मा छोड्न चाहन्थे, र त्यो गरे - धेरै केहि मान्छे मास्को मा Pashkov हाउस थाहा छैन। को वास्तु कृति प्रशंसा धेरै, परियोजना को लेखक र प्रबंधक छ जो मालिक, थियो जान्न चाहन्छु हुनेछ। र पत्रुस म नौकर को नाति सात पहाड मा फैलयो हाम्रो राजधानी असामान्य आकर्षण गर्न योगदान, बनाउनुभएको एक व्यक्तिको रूपमा शताब्दीयौंदेखि प्रसिद्ध छ।
एक सात पहाड मा निर्मित कि शहर को
संसारमा त्यहाँ एक दर्जन शहर, एउटै रोम, Constantinople र वाशिंगटन सहित पहाड को संख्या मा स्थित बढी छन्। स्पैरो हिल्स, Lefortovo पहाडी Zayauze - नाम मास्को पहाड कल्पनाले उतेजित गर्नु। Vagankovsky हिल, मास्को सबैभन्दा हडताली ठाँउहरु को 1784 संग पहनाया छ जो, अब Presnya जिल्ला संग एकीकृत छ र "तीन पहाड" भनिन्छ।
राजधानी को धेरै केन्द्र
तपाईं केन्द्रीय प्रशासनिक जिल्ला नक्सा हेर्न भने, हामी ठेगाना (सडक Vozdvizhenka,3\_ 5, भवन 1) बावजुद देख्न सक्नुहुन्छ, मास्को मा Pashkov हाउस Znamenka र काई को Crossroads छ। Starovagankovsky गल्ली र भवन को एक स्मार्ट मोहरा गर्न प्रमुख मुख्य बाहिर निस्कन पनि काई सडक गर्न तैनाथ छ, र त्यसपछि - को Borodino पहाडी र Kremlin गर्न। "पृथ्वीको नाइटो", र मात्र। राजमहलको मूल दुई ढुङ्गा पूल, grottos, मूर्तिहरु, फोहराहरू भव्य गढा-फलाम बार घेरिएको संग घर सुन्दर terraced पार्क conceding विभाजित भएको थियो पहिले छैन, जो एक खण्ड वर्तमान दिनको Znamenka द्वारा संरक्षित गरिएको छ। को पाठ्यक्रम, साइट को क्षेत्रमा सेन्ट निकोलस को Pashkov घर चर्च स्वामित्वमा थियो। हिल मा Vagankovsky दरबार मास्को मा पहिलो थियो, र देश मा एक धर्मनिरपेक्ष भवन जसको Windows थिए देखिने इभ्यानोभो र गिरजाघर वर्ग र Kremlin। नजिकैको एक पत्थर पुल छ।
वास्तुकला को प्रतिभा
त्यतिबेला जो मा Pashkov हाउस जस्ता masterpieces को लेखक हुन सक्छ मास्को? आर्किटेक्ट Vasiliy Ivanovich Bazhenov (1738-1799), पहिलो कला, एक मानिस जसको merits रूसी वास्तुकला अगाडि overemphasized गर्न सकिँदैन को शाही अकादमी को उपाध्यक्ष-अध्यक्ष। क्लासिकल प्रतिभा को मात्रा बुझ्न क्रम मा, मास्को मा उहाँले 10 वर्षसम्म निर्माण जो Tsaritsyno र Pashkov हाउस मा एक दरबार जटिल उल्लेख गर्न यो Suffice।
रचनात्मकता को शीर्ष
विशेष गरी राम्रो आफ्नो मास्को कृति। महल-कथा, विशेषज्ञहरु अनुसार, एक पहाडी Vagankovsky Bazhenov मा स्थापित। मास्को मा Pashkov हाउस वास्तुकला सबै connoisseurs, मात्र होइन अद्वितीय सौन्दर्य, तर पनि "सिद्ध, सिद्ध नै भवन मा सबै भागहरु को पङ्क्तिबद्ध" रमाउनुहुन्छ त्यसैले एक पारखी र वास्तुकला आई Grabar को प्रेमी लेखे। र कुनै एक, उहाँले आर्किटेक्चर शिक्षाविद् Vasily Bazhenov, सुन्दर दरबार सिर्जना कि उकालो, देख एक स्तम्भ मा एक Monumental मूर्तिकला resembling विश्वास गर्दछन्। मास्को मा Pashkov हाउस, जसको शैली - classicism, यो दिशा मा रूस को एक प्रतीक भयो। एक कोण मा आसपास सडकमा स्थित, घर एक दूरी मा राम्रो, उदाहरणका लागि, अनौठो पक्ष Volkhonka को सुरुमा स्थित एक बिन्दु देखिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो कोण
तपाईं एक दूरी देखि घरमा हेर्न भने, यो एक संरचना समाधान पहिल्याउन सम्भव छ - बार पोस्ट भएको गजेबो को colonnade खडा भएको सुरुचिपूर्ण पर्खालहरु को, छाँयामा शीर्ष वरिपरि सीढी र मोहरा को स्तम्भहरू, गोलाकार छत wraps जारी छ। केही सार्वजनिक स्रोतमा पर्खालहरु को मूल रंग सुन्तला थिए बताए। एक एकदम ठूलो आकार को यो वास्तु कृति माथि लक गर्न खोजिरहेका, हावा को छाप दिन्छ।
घर त राम्रो थियो, र एक अतिरिक्त जो भएन र Paszkowski महल, आफ्नो बहाली लागि कोष 1812 को आगो, पछि, मास्को लागि मूल्य प्रतिनिधित्व, मालिकहरूको शानदार धन बावजूद, राज्य कोषको देखि विनियोजन थिए। को महल को मास्को चमत्कार थियो - आफ्नो सौन्दर्य आतिशबाजी र रोशनी, मालिकको दिएको चाल को सम्मान मा प्रबन्ध थपियो। अनौठो चरा महंगा cages बसेर वा पार्क मार्फत strolling, मास्को मा Pashkov हाउस उत्पादन कि शानदार छाप वृद्धि। लेख मा फोटो फरक कोण बाट दरबार देखाउन, र उहाँ कत्तिको असल तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ।
हात बाट हात गर्न
तरिका केहि विशेषज्ञहरु ग्रन्थकारिता Bazhenov शङ्का पढ्न निराशाजनक छ।
1839 मा एक प्रकारको पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री Pashkov अन्तिम मा यो विश्वविद्यालय को आवश्यकता लागि राज्य कोषको द्वारा किनेको थियो। तर पछि पटक सुन्दर घर मालिक परिवर्तन गर्न छोडेनन्। त्यसैले, पहिले नै 1843 मा यो बारी मा, आचरण को मास्को संस्थान परिवर्तन थियो जो, आराम विश्वविद्यालय बोर्डिङ स्कूल, 1852 मा बसे, र पछि - शहर जिम №4 मा। 1861 मा Rumyantsev संग्रहालय, Pashkov हाउस बित्यो।
"लेनिन पुस्तकालय" को मूल
र 1921 मा, यो 400 भन्दा बढी requisitioned निजी पुस्तकालयहरु प्राप्त गर्दा संग्रहालयका अन्य सबै विभाग अर्को भवन हस्तान्तरण छन्। बाँकी पुस्तकहरू प्रसिद्ध "लेनिन पुस्तकालय", फेरि, बारी मा, रूसी राज्य पुस्तकालय भए जो नींव छन्। जो सोभियत रूस मा छैन पुस्तकालयको थाहा थिएन? , को Pashkov हाउस बारेमा कुनै विचार थियो गर्नेहरूलाई पनि यो सुने। यो पुस्तक डिपजिटरी महिमा आज Pashkov हाउस कम प्रसिद्ध कुनै थियो। त्यो, धेरै सुविधा फिलिमहरु को नायिका थियो उनको कविता लेखे - "... र उन्नाइसौँ शताब्दीमा देखि, घर पुस्तकालयको मा सारियो! ठीक छ, पाठकहरूलाई सधैं यहाँ पर्खिरहेका छन्, कि "लेनिन पुस्तकालय" नाम हो ... "।
दन्त्यकथा को जन्म favoring ठाँउ
जब तपाईं धेरै मालिक मास्को मा Pashkov हाउस जसको वास्तुकला दन्त्यकथा संग overgrown अस्तित्व समयमा लुकेका र रहस्यमय कुनामा धेरै, प्रदान गर्दछ, परिवर्तन। मात्र होइन दरबार तर पनि सम्पूर्ण Vagankovsky पहाडी रहस्यमय cavities, गुफाहरु, भूमिगत caverns को पूर्ण र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो Pashkov हाउस अन्तर्गत एक विशाल, 8 राम्रो सेतो पत्थर लहरै व्यास मीटर, पत्ता थियो। त्यो कहाँ जान्छ, यो असम्भव भन्न लागि, अध्ययन किनभने राम्रो को संक्षिप्त पर्खालहरु, र भवन जग पतन को डर को पूरा भएनन् किनभने छ। नाम हो - र यो यसलाई यहाँ भण्डारण गर्न भनेर Libereya प्रसिद्ध सक्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि, एउटा पुरातत्वविद् IY Stelletsky, यो व्यक्त भएको थियो) सुझाव गरिएको एकदम प्राकृतिक छ Ivana Groznogo पुस्तकालय। किन छैन, सबै पछि, एक भाग्य Byzantine राजकुमारी Sofi Paleolog थियो, इवान III को पत्नी भइन् जो दिग्गज पुस्तकालय स्थानहरू, को बारे मा 60 कथित भण्डारण छन्।
Huggie भन्दा कुनै खराब
हामी अर्को पौराणिक कथा, को Pashkov हाउस बारे भन्न सक्दैन। त्यो प्यारा, तर बिल्कुल अविश्वसनीय छ - मिथक हवेली मा fanned को भूत Rubakin Nikolai Alexandrovich (1862-1946), "पुस्तकहरू माझमा" र एक सल्लाहकार सूचक लेखक जीवित छ "पाठक र पुस्तकको मनोविज्ञान।" यो मानिस, bibliologist र bibliographer, दुई ठूलो पुस्तकालयहरु (200 भन्दा बढी हजार मात्रा) गरे र तिनीहरूलाई मानिसहरूलाई उपहार रूपमा दिए। कसले, को "bookworm" पुस्तक भण्डार को मुख्य देशहरूको हल लक्षविना हिड्नु छैन (शब्द को सबै भन्दा राम्रो अर्थमा) भने! मानिस र पौराणिक कथा प्रशंसक भनेर हामी सही पुस्तक फेला पार्न मद्दत लागि उहाँलाई बारी भने, यो कहिल्यै असफल तर्क।
कि 2009 मा समाप्त बहाली पछि, हवेली को सही भाग पुरातन हस्तलिपिहरूमा को रिपोजिटरी छ, र बायाँ एक लाइब्रेरी स्थित छ।
घर-लिजेन्ड गर्न यात्राहरु
तिनीहरूले त्यो आगो को घटना मा राज्य कोषको राखिएको जहाँ "मास्को भूमिगत",, त्यसैले अक्सर तहसनहस मध्ययुगीन राजधानी प्रवेश, Vagankovsky पहाडी मा ठीक थियो कि तर्क। खैर, Woland मास्को मा एक विदाई नजर फालिएको थियो अरू कहाँ? सबै पक्षहरूमा, मास्को मा Pashkov हाउस अनुपम छ। यसमा भ्रमण विश्वभरिबाट पर्यटकहरु चासो धेरै मुद्दाहरू ज्योति बगाएको, र तिनीहरूलाई Kremlin सबैभन्दा सुन्दर दृश्य पराउँछु मौका दिनुहोस्। पर्यटन धेरै सूचनात्मक छन् र दैनिक प्रस्ताव छन्। ठाउँ भेला, नियम, यो विपरीत Kutafia Kremlin टावर छ वा Fyodor Dostoevsky गर्न स्मारक, वा मेट्रो "पुस्तकालय तिनीहरूलाई को बाहिर निस्कन मा। लेनिन "। पर्यटन व्यवसायि द्वारा आयोजित गर्दै छन्, केही निर्देशन - यो दरबार को आन्तरिक संरचना र सजावट देखि Woland को विषय, छ, मास्को मा सबै भन्दा सुन्दर र रहस्यमय भवनहरु संग सम्बन्धित छ जो सबै रहस्यमय, - Pashkov घर।
Yuriev-Polsky मा सेन्ट जर्ज गरेको गिरजाघर: फोटो, वास्तुकला
मास्को बारोक शैली शान
लारिसा बीच क्लब साइड - राम्रो बाँकी र इतिहास को एक बिट
मर्मान्स्क मा स्मारक बिरालो वीर्य: इतिहास, ठेगाना, फोटो
रोचक मोडेल "सैमसंग": एक संक्षिप्त विवरण
रूस मा coldest ठाउँ। उत्तर रूस